musha ASIAN STARS Arda Turan Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBhola Genius inonyatsozivikanwa neNickname; 'El Turco'. Our Arda Turan Childhood Story ne Untold Biography chokwadi inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda OFF uye ON-Pitch zvishoma zvakazivikanwa pamusoro pake. Pasina mamwe adieu, tanga Tanga.
Arda Turan Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Makore ekutanga
Arda Turan akaberekwa musi wa 30 January 1987 muIstanbul, Turkey kuna Mr Adnan Turan (Baba) uye Yuksel Turan (Amai). Akakurira asina ruzivo uye haana ruzivo rwezvaaizova iye kana kuti chii chaizouya zvakare muupenyu hwake.
Arda's academic rekodi yakanga isina kuremekedza zvakare. Mumazuva ake achiri kuyaruka akatambura kuchikoro uye aiwanzowanika pakuguma kwakashata kwekushanyira mutungamiriri wechikoro. Yaiva idzi nyaya dzekuranga dzakaita kuti asarudze kuenda kuchikoro kwete kudana kwake. Panguva ino, bhora rakava chinhu chete chaaigona kufunga.
Chisarudzo cheArda chokutamba mubhola rakagamuchirwa nevabereki vake. Vakakurumidza kuita chisarudzo chake nokukurumidza vachimunyorera kune imwe nzvimbo yemahombe academy muIstanbul.
Vabereki vake vaiziva kuti kunzwisisa mwana wavo ndechimwe chezvinhu zvinokosha zvavanofanira kudzidza sevabereki vakanaka.
Vaive vakabatsira uye vanobudirira kutungamirira nekurera Arda sezvaakakura. Arda nenguva yakatanga unhu hwakasiyana hwemunhu hunoreva bhora uye yakaramba yakasimba muhupenyu hwake kusvika musi.
Sezvo tarenda yake yakatanga, vabereki vake vakawedzera kutsigira. Nzira yakanakisisa yekumuita kuti afare ndiyo kumutora kunze kunotenga. Vaizomutenga chero chaaida. Vakamudzivirira pane chimwe chinhu chingaita kuti zviroto zvake zvidzivise. Zvakanaka, vanomurinda achirara, kudya uye kutamba mutambo wakanaka.
Arda Turan Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Upenyu hweMhuri
Baba: Mr Adnan Turan munhu rugare ari chaizvo yekwaanogara okutengesa bhizimisi Bayrampaşa muruwa Istanbul.
Anogara achirangarirwa nekuda kwebasa raakapa mwana wake mumugwagwa wake. Kusiyana nemudzimai wake Yuksel, haafaniri kufunganya zvakawanda mumabasa emwanakomana wake.
Amai: Yuksel ndiamai vaArda. Anonyanya kutaura uyo anozivikanwa zvakanakisisa pakudzivirira mwanakomana wake mukati mekukakavadzana.
Akakurumidza kuchengetedza mwanakomana wake panguva yechiitiko chemiti yepambani iyo mwanakomana wake Arda akarova mumwe mutori wenhau weTurk Bilal Meşe.
Maererano naYüksel Turansaid, "Kuita mhirizhonga yemwanakomana wangu kwakanga kwavamba '.
Amai Arda Turan, Yüksel Turan, vakati, "Arda munhu akanaka kwazvo uye kazhinji mumwe munhu asingadi kuputsa chero munhu, akawana kubudirira uko hapana mubhokisi angakwanisa kupinda munyika ino, ari kuribhadharira iye zvino ... Vari kuedza kupedzisa mwanakomana wangu neboka rose lynch ! Ndanyora zvisingabatsiri pamusoro pemwanakomana wangu kuti zvakaoma kusava nehanya navo. " Zvisingabvumirwi kupa nzvimbo kumashoko.
Hanzvadzi konama: Okan Turan mukuru mukuru.
Okan akagamuchira His Undergraduate Degree (BSc) kubva kuIstanbul Technical University, Aeronautical uye Astronautical Engineering Faculty mu1989 uye Master's degree (MSc) kubva kuIstanbul Technical University, Faculty of Management, Management Engineering mu1992. Okan akatanga basa rake roumhizha mumunda wemisika yemabhizimisi seMarian Analyst paData Securities Co. mu1992 uye akashanda se Chief Chief Analyst kusvikira zuva.
Arda Turan Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Miranda Shelia uye Arda Turan vave vachifambidzana kubvira Dec Dec 2016. Muenzaniso weGeorgia wakanga uri musikana wekupedzisira saiye panguva yekunyora.
Aslian Dogan (akatarisa pasi) aimbova musikana wekare weArda Turan. Anoberekwa musi wa 4t December, 1985 uye anotaura zvose chiChirungu neTurkey. Aslian naArda vakatanga mu 2014 uye vakapera muna December 2016. Zvose zviri zviviri zvaiva pedyo zvikuru.
Asis Aslian, Arda Turan ane humwe hukama hwe 5 mumakore. Arda Turan hupenyu huri muchidimbu hunosanganisira mazita e6. (1) Dilara Oztunç (Dated kubva ku2007 - 2008), (2) Sinem Kobal (Yakanyorwa kubva ku2012 - 2013) (3) Selin Imeri (Yakanyorwa mu2012) (4) Idil Firat (Yakanyorwa muna 2013) (5) Aslihan Dogan (Dated mu 2014) (6) Miranda Shelia (2017).
Arda Turan Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Anofunga kuti Iye aive Nyeredzi yePapa
Munguva yeLa Liga nguva yechando, Turan yakasarudza kuedza uye ichiita sevhiri nyota. Akaenda kumba kuTurkey kuzoimba pa "The Voice". Akaita rwiyo runonzi 'Sari Cizmeli Mehmet Aga' - rwiyo rwechiTurkey rwiyo rwechirongwa uye, zvakanaka, ngatitaurire kuti anofanira kunamatira kubhola. Vatongi vakanga vachiri kutsvaga zvigaro zvavo kuzotarisa kuti vaone kuti ndiani aisakanganisika muenzi wacho.
Arda Turan Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts-Idzozi Michael Michael uye Roger Federer
Mutevedzeri wetsvuku anoonekwa sechiratidzo chezhinji kunyanya muTurkey. Asi Arda Turan ine zvidhori zveimwe mitambo. Tsika yeTennis Roger Federer uye Basketball icon Michael Jordan vatambi iye anotarisa kumusoro.
Mukupindurirwa, akanga ataura, "Ndinogara ndichiedza kuvandudza, avo vanonyanya kutamba mitambo uye mukadzi vanoedza kuve nani. Ndokusaka Michael Jordan uye Federer mifananidzo yangu. "
Zvose idzi nhoroondo dzinozivikanwa kwete chete nekuda kweunyanzvi hwavo uye mano avo mumunda asiwo nenyasha dzavo uye maitiro avo evanhu. Vashandi veTuran vave vachiwanzozvitsanangura semoyo-mutsa uye munhu akanaka uyo anonzwa nezvezvinhu zvaanotenda.
Arda Turan Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts-Rudo Kune Cars
Maererano neTurkey Press, Turan yakambova neAston Martin DB9 uye Mercedes-Benz SLS AMG.
Ane chido chemotokari uye iye zvino anotya an Audi RS6. MunaJanuary 2009, iye aibatanidzwa mukuparara kwemotokari Istanbul. Nenzira yakanaka, Turan haina kukuvadzwa zvakakomba uye yakaramba ichidzidziswa nemapfudze uye maronda.
Arda Turan Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts-Injury Issues
Pana 16 November 2008, Turan yakagumburwa panguva yemutambo neIstanbul BB.
Mushure mekukurumidze kuenda kuchipatara, akaonekwa kuti ane chirwere chemwoyo chinonzi arrhythmia. Zuva rakatevera chiitiko chacho, vanachiremba vakataura kuti Turan yakanga ine hutano hwakanaka uye kuti kupera kwakanyanya kwakakonzera arrhythmia. MunaNovember 2009, akatambura nevana vashoma vehomba asi akadzoka mumazuva mashomanana kuti adzokere zvakare.
Kunyange munguva ichangopfuura, veTurk vave vachiziva nezvekukuvara. Mazuva ano, ayo kana mabvi kana hamstring. Zvechokwadi, achizvikuvadza mumutambo kune vashandi vake vemazuva ano, akasiya munda nemisodzi mumeso ake.
Pasinei nokukuvara kwake mumuviri, anozivikanwa kuva murwi. Kazhinji inofungidzirwa mumutambo wevatambi nevaya vasina kumboti mweya wakafa. Chimwe chinhu chisiri nyore kuuya asi chinonyanya kukosha kune vateereri.
Arda Turan Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts-Kurwisana kunokonzera naLeonidas
The Uncanny Resemblance Pakati Pezvakakurumbira Actor, Gerard Butler AKA Leonidas we300 uye Arda Turan akambogadzira internet pane dutu. Izvo zvakakonzerwa nemunhu wose ndezvaivepo zvechifananidzo cheArda chekudengenyeka kwenyika iyo yakanyatsobatana neyaLeididas.
Arda Turan Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Aida kutamba kuLiverpool
Vatambi vanowanzozivikanwa kuti vanotaura rudo rwavo kune rimwe boka. Vamwe vane ruzivo rwakanaka rwekutamba kune avo vanodikamwa asi vamwe vasingaiti.
Arda Turan ndeyechikamu chekupedzisira. Kudzoka kuEuro 2008, Andrey Arshavin akazivisa kuda kwake FC Barcelona. Zvinosuruvarisa, kufamba kwacho hakuna kumbopfeka. Muchi2011, Turan, achitamba kuGalatasaray zvakare akaratidza rudo rwake rwezviRungu dzakaRiverpool. Akati: "Sezvandiri kutaura nguva dzose, Liverpool inonditora nekuda kwetsika dzavo.
"MuEurope, ini ndiri mutsigiri weLiverpool, saka kana ndikaenda kunotamba muEurope, ndinoda kuvadzvorera."
Akataura kuti yakanga iri kurota kwake kutamba kune Reds yeMerseyside. Zvisinei, Liverpool haana kuuya kuzodana. Atletico Madrid akaita uye kutevera kushanda kwake naGeorge Simeone pachikwata chakavatora kuenda kuLa Liga neChikwata cheMichampions League iye zvino akapfuurira ku Camp Nou. Izvo zvinoratidzika kunge zvakange zviri Liverpool kurasikirwa zvechokwadi zvave zviri kuwanikwa kweBarcelona.
Arda Turan Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Pane imwechete Yakarasa boot pamutambi
Pasinei nekuva muenzaniso wakanaka nemitambo yake yekuraira, iyo Turan haina kunyanya kutsamwa nenzira huru munguva pfupi yapfuura, ichikanda chikwata chake muAletico's Copa del Rey kukunda kuBarcelona svondo rapera.
Kunyange zvakadaro, haazove ari wekupedzisira wepamusoro kuti atadze musoro wake.
Arda Turan Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Murume ane Golden Heart
Arda anozivikanwa kuva nemoyo wegoridhe. Akangobatanidzwa muchikwata cherudo muEgypt kusimudza mari yemisha yenyatima munyika yeArab. Gore rakapera, akamboita mutambo wekuda muimba yake yekare (Izmir Ataturk Stadium) kuti atore mari yemhuri yeVa Soma iri vakaurayiwa.
Anonyanya kuzivikanwa nekubatsira vana vanorwara. MunaMay, 2014, akagadzwa Mumiriri weGoodwill kuKajaja Kuurawa kunobatanidza nekuurayiwa kweatleast 161 yevanhu vechiAzerbaijani vaigara. Mabasa ake anosanganisira kukwidziridza nekusimudzira rugare rwepasi rose.
Iyeyewo murume wemhuri. Aine mubhadharo wake wokutanga, akatenga imba kuvabereki vake uye achangotenga motokari kuhama yake, kwete chero motokari chero ipi, Porsche.
Arda Turan Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -A Socialist
Arda Turan akambovhura imba yake muMadrid kune vanhu vari kunze kwematongerwo enyika ezvematongerwo enyika. Iyi nzvimbo inoshandiswa nekuda kwekukakavadzana nekukurukurirana. Turan pachake ari chigarireji uye anozivikanwa kuti anobata vose vari mumba mavo nenzira imwechete pasinei neupfumi uye basa.
Akakurira mune imwe nzvimbo yekushanda muIstanbul uye akapedza makore ake okutanga mumigwagwa. Nguva dzakaoma panguva yehuduku hwake uye matambudziko anotarisana nevekushanda akave ane hupenyu muupenyu hwake. Muhurukuro yaakange ataura, "Ndagara ndichitsigira kodzero dzevashandi, kodzero dzevanhuwo zvavo."
Chirevo chezvematongerwe enyika chakanyatsogadziriswa neTuran kuburikidza nezvizvarwa. Baba vake vakanga vasiya kusimba mazano, baba vake vakanga vari mutsigiri wezvematongerwe enyika akanaka.
Arda Turan Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Football Career
Turan yakatanga kutamba bhora muBayrampaşa. Paakanga ari 12 chete, akabatana neGalatasaray mu2000 kwaakamira. Akaita chikwata chake neGalatasaray mu2006 mushure memakore mashanu achitamba mumapoka evanhu vechidiki. Yakanga isiri iyo nguva dzose iyi yakasimba. Muduku wechidiki akaoma kurwisana nematambudziko ebhora rezuva nezuva, kwete zvishoma kukurumidza uye simba rinodiwa mutambo. Arda ndiye muchepiti mutsva mugore rekuzvarwa kwe1987 gore rezera rezera, uye rakaratidza mumitambo yake yepakutanga. Vakuru, vane ruzivo rwechikwata mukati memiti yacho vakanga vasingazivikanwi kune mutambi aiva nemafungo ose asi asina kubudirira.
Akaita kutanga kwake kweboka reTurkey munyika munaAugust 2006. Turan yakatambira Turkey kwenguva yekutanga yekurwisana neLuxembourg inobatana neyekuti Turkey yakakunda 1-0.
Mumwaka we 2006 / 07, Turan yakava mumwe wevadzidzi vaGalatasaray anokosha zvikuru. Akataura zita rake rekutanga reSun League mu2008. Chikwata cheSpain Atletico Madrid chakamupa chikwereti che 12 mamiriyoni munaAugust 2011. Mumwaka wake wokutanga paAtletico Madrid, Turan yakakunda Europa League uye UEFA Super Cup. Nhamba yeAtletico 10 yakaita basa rinokosha mubato rake rekutsvaga kwechikwata mumutambo we 2013 / 14. Mwaka iwoyo, Atletico Madrid yakakodzeri yeChampions League yekupedzisira kwekutanga panguva yeC40 makore. Turkish star Turan yakaronga 22 vavariro uye yakanga iine 32 inobatsira mumitambo ye177 mumakore ake mana ekupenya kweAtletico Madrid. Nekubhadhara mari yeE34 Mamiriyoni eEurope, kuiswa kwekusha kweBarcelona kunonyanya kukosha mutambi weTurkey munhoroondo.
Arda Turan Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Choking a Journalist
Arda Turan kubva kumutambo weTurkey nyika yakauya mushure mekunge ichitsvaga mutori wenhau mumakwikwi eboka.
Vaitaura kuti vakave nekutaura nemashoko uye mutori wenhau pane imwe ndege mushure mekukwanisa kushamwaridzana neMasedhonia pamusoro pekuzivisa kuti zvakanga zvaitwa izvo zvakapa Turan kuumba kusagadzikana pakati pemapoka emabhonasi mari.
Maererano ne Reuters, Turan yakabvuma "kukanganisa" uye yakasiya tende rake renyika.
"Ndakaita chikanganiso ndichipfekedza yunifomu yemauto yenyika. Icho chinhu chakanga chisingafaniri kunge chakaitika kune imwe ndege yemauto, " akati.
Maererano nepepanhau reChirungu The Independent, icho chiitiko chakaitika paundi ndege yeItaly apo Turan inonzi inosvika Bilal Meşe webhuku reTurkey Milliyet. Hezvino izvo The Independent inoratidzira kuti yakashandurwa:
"Ndiudze Bilal Meşe, wakanga uripo here?" Akatanga. "Iwe waive nesu here pawakanyora pamusoro pemabhonasi? Ndiani wandakakumbira mari kubva? Ndiani akandikumbira ini mabhonasi kubva? Taura. Handeyi nazvo. Ndiani akakuita iwe kuti unyore iyo mharidzo? "Turan yakashamiswa kuti yakashevedzera kuMeşe, mutori wenhau wezvematongerwo enyika uyo akanga ataura kuti mutengesi weTuran aine vazhinji vemauto emhirizhonga.
Uye rute rukaTuran rwakanzi rwakaenderera mberi mushure mekunge mushumo uchitaura kuti aifanira kudziviswa nevadzidzi pamwe chete sezvaakabata Meşe nehuro. Arda Turan akataura kuti haanzwi kuzvidemba uye kuti haazove achitamba neTurkey zvakare. Izvo zvakakodzera kutaura kuti vose vari vaviri vaiva shamwari dzakanaka sekuonekwa mumufananidzo uri pasi apa.
Arda Turan Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -LifeBogger Biography Rankings
Iye anonyanya kuzivikanwa nokuda kwebhora rake rekudzora, unyanzvi hwekugadzirisa, uye maonero. Isu tinopa hupenyu hwake hwepasi pano.
Jose Gimenez Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts